Unokukhetha njani iparele?
Abanye bathanda izinto zegolide, ezinye zifana neendwangu zenziwe ngamaparele. Kodwa ukuba ufuna ukufumana ubucwebe be-classic obuyigugu obuya kuhlala buyazi, kufuneka uthenge iintambo zeeparele. Lo mzobo unokukwenza ukuba ungenakunyaniseki, ngaphandle koko ungaditywa nayiphi na imeko. Nangona kunjalo, njengawo nawuphi na into, umgangatho weeparele uhlukile. Ngoko ke, ngaphambi kokuba uthenge umhlobiso onjalo, kufuneka ukwazi ukuba ukhetha iparele elifanelekileyo.
Ngaphambi kokuba uthenge iiparele, qhathanisa umgangatho weigrafu ezicetywayo. Xa uthengwa, qaphela ukungafani kokuhlanzeka, kwiimithunzi, ubukhulu kunye nokujikeleza kweeparele. Kodwa ingqwalaselo eninzi inikwe umdlalo wombala kunye ne-glitter yeeparele. Emva kwakho konke, ziyimpawu ebalulekileyo okufuneka ufunde ukuzihlola.
Xa uhlolisisa, qhathanisa nomnye umlinganiselo weempawu ezahlukeneyo: ukukhanya kukugqwesileyo, kodwa ukujikeleza akubalulekanga; Ujikelezo luhle kakhulu, kodwa ukukhanya kubunzima; Ubume buhle kakhulu, kodwa ngodidi lweeparele akukho ukuvumelanisa; yonke into eqhelekileyo kunye nombala kunye nesicwebezela, kodwa ubuso beeparele abuhlambulukanga.
Kukwacetyiswa ukuba uzame iiparele ukuba uqiniseke ukuba umbala weeparele uhambelana nombala weenwele zakho kunye nesikhumba sakho. Buza umthengisi ukuba umbala ungokwemvelo ngeeparele, ingakumbi xa uthenga amatye anombala (umzekelo, i-blue, gray, black). Ngokuqhelekileyo, amatye emvelo anemibala ayabiza ngaphezu kwamatye amhlophe.
Ubukhulu. Ukucela ubukhulu beeparele, qhathanisa ukungafani kwiindleko zeeparele zobukhulu obuhlukeneyo, kodwa nomgangatho ofanayo. Intambo ephindwe kabini yeeparele ezincinane zibukeka zihle kwaye zingabizi ngaphaya komtya omnye kunye neeparele ezinkulu.
Ukujikeleza. Eyona nto ibaluleke kakhulu iiparele ezijikelezileyo, kodwa azinqabile. Ukujonga ukujikeleza kobunzima beparele, yifake phezu komhlaba ocolileyo. Ukuba umphezulu ujikeleze, ilitye liya kuhamba ngokukhawuleza nangokuthe tye.
Symmetry. Ukuba iparele ibingqamaniso, ngoko kufuneka ibe yi-oval, igqityiwe, ingafana nomfanekiso we-drop or pear. I-pearl ephezulu kakhulu ihambelana nomda we-axis, eyona nto ibaluleke kakhulu. Kungekudala, ekwakhiweni kwezinto zokugcoba zisetyenziswe ngokunjalo ngokunjalo neeparele, ngakumbi iiparele ezithandwayo.
Ukuba iiparele zi-asymmetrical, ngoko ibizwa ngokuba yi "Barok" kwaye ingaba yinto engabonakaliyo. Kwiminyaka yakutshanje, iiparele ziye zithandwa ngenxa yobume babo obuhlukile.
Umbala. Umbala weeparele zendalo unokuba nemibala emininzi eyahlukeneyo. Kulo lonke lizwe kukho ukukhethwa kwazo kwiimibala yeeparele.
Ekhethekileyo iiparele ezimhlophe, kufuneka uqinisekise ukuba umbala wawungekho grey okanye uluhlaza, kodwa umhlophe. Nangona kunjalo, i-overtone ngezinye iyakwandisa ixabiso leeparele ezimhlophe. I-Overtone idibanisa umbala ohlukileyo. I-overtone eyona nto ibaluleke kakhulu. I-overtone ibomvu okanye eluhlaza kumbala.
Uluhlu oluluhlaza lubona luxabisekileyo kwiiparele ezimnyama.
Ukubona i-overtone nokuvavanya iparele ngombala wayo, uyiqondise ukusuka kwimida ecacileyo kwaye ucinge. Ukuba ubheka iparele phantsi kwelanga elithe ngqo, awukwazi ukubona kuphela i-overtone, kodwa nakweminye imibala embala - oku kuthiwa yi-iridiscentness. Ngokungafani neeparele eziqhelekileyo, iiparele ze-iridisscent zizona zixabisekileyo.
Okwangoku, i-lavender, igolide, i-pink shades iyathandwa kakhulu. Phezulu. Xa uthenga iiparele, jonga ngokukhawuleza kuzo zonke izicwangciso. Umqondiso weeparele ezilungileyo kukungabikho kweziphoso - iimpompo, izitenxo, iindawo ezimnyama okanye iintambo.
Shine. Ukuba iparele ibonwa ilanga ngqo, unokubona ukuba ezinye iiparele, ngokungafani nabanye, zikhanya ngakumbi. I-gloss enye yezinto ezibalulekileyo, njengokuba i-glitter ngaphezulu kwiparele, ibaluleke ngakumbi.
Ubukhulu. Iindleko zeeparele ezinkulu ziphakamileyo kakhulu kuneeparele ezincinci, kuba amatye amaninzi ayinqabile kwimvelo.
Ukuqinisekisa ubungqina beeparele kulula kakhulu: udweba iparele phezu komnye wezinyo, ilitye lenene liya kugaya.
UPandora unikeza iphupha: umhlobiso ogqibeleleyo woNyaka kaNtsha
Ukuqokelela kwezinto zokugqoka ezivela kwiTiffany & Co kunye ne-Dover Street Market
Iipropati eziwusizo ze-amber
Ukuhlobisa ihlobo: I-TOP-3 i-best trends-2017
Imibala ephathekayo, iimpahla zonyaka 2010
Indlela yokunyamekela kakuhle intshontsho
Ukuba unokushiya isigxina ngaphandle kwendlu
Ubungqingili, ilinen yelinen
Inkukhu yokuzalisa "Intliziyo"
Yintoni umfazi okhulelweyo ephuphayo?
Iipancakes nge-lemon kunye ne-ricotta
Isicwangciso sokuSebenza sokuhamba ukulahleka kwesisindo
Kutheni ufuna ukuphupha ephupha? Ukutolika kweencwadi eziziwayo zephupha
Indlela yokwandisa imilenze yakho ngokuzivocavoca